Iisamsung ezimbini ezineekhamera zangasemva ezintathu kunye neebhetri ezinkulu ziyavela | I-Androidsis
Iifowuni ezimbini ezintsha zeSamsung Iqinisekisiwe yiarhente yeTENAA yase China, phantsi kwamagama ekhowudi I-SM-A3050 y I-SM-A3058.
Ukujonga amanani omzekelo weefowuni ezimbini, ngekhe ube uphosakele xa usithi ziinethiwekhi ezahlukileyo Galaxy A30. Nangona kunjalo, ukucaciswa kwayo kukude kakhulu kunoko kweGPS A30 esele isungulwe. Inyaniso, ziyafana kakhulu nenkcazo ye- I-Galaxy M30 (SM-M305F). Masiqwalasele ngakumbi ...
I-Samsung SM-A3050 kunye ne-SM-A3058 inayo Isikrini se-6.4 intshi ye-AMOLED, njenge-M30, kodwa ngesisombululo se-HD + sama-pixels ayi-1,560 x 720, asezantsi. Uluhlu lwe-TENAA luthi baya kuza ne-1.8 GHz okanye i-1.6 GHz octa-core processor edityaniswe ne-4, 6 okanye i-8 GB ye-RAM kunye ne-64 okanye i-128 GB yendawo yokugcina enokuphakanyiswa ngokusebenzisa ikhadi le-MicroSD.
I-Samsung Galaxy M30
Izixhobo, ezikhala ukuba zibe phakathi kuluhlu, zinokuseta ikhamera efanayo neGPS M30. Kukho i-13 MP + 5 MP + 5 MP kathathu yekhamera combo ngasemva kwabo kunye ne-16 MP sensor ngaphambili ye-selfies kunye nokwamkelwa kobuso.
Zombini iitermina zibaleka I-Android 9 Pie Njengenkqubo yokusebenza, banesikena seminwe kwaye banakho konke ukuzimela ukuba Ubukhulu bebhetri ye-4,900 mAh unokunikezela, okuza nenkxaso yokutshaja ngokukhawuleza. Kuya kuza kumnyama, igolide kunye nohlaza okwesibhakabhaka. Ubukhulu bayo bunikwe njenge-75.1 x 159 x 8.4mm kwaye inobunzima be-174 yeegram.
Isamsung yazisa i-Galaxy M10 kunye neGPS M20 ngokusemthethweni
Okwangoku akukho mifanekiso. Nangona kunjalo, oko kubonakala ngathi yeyona nkxalabo incinci. Iifowuni ezinokuya kuthi ga kwi-8GB ye-RAM, ukuboniswa kwe-HD + kuyinto engaqhelekanga. Siziva ngathi olu luhlu luyadideka kwaye siyathemba ukuba i-TENAA izakulungisa kungekudala.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » Iifowuni ezimbini ezintsha zeSamsung ezineekhamera zangasemva ezintathu kunye neebhetri ezinkulu azikafiki
Ukufumana iinkumbulo zakho ezilahlekileyo kwipuzzle enkulu ye-Mindsweeper: I-Puzzle Adventure